I zi lwanyana. Bahlala bekholisa xa sibuhlungu. Gcina isimo sethu sengqondo. Bafana nomntwana, bafuna amehlo kunye namehlo. Kodwa, nangona kunjalo, kwiintsapho ezininzi.
Ukuba kukho umntwana kwintsapho, ngoko, ngolunye usuku, ngokuqinisekileyo, kuza kufika umzuzu apho umntwana uya kucela khona itekisi. Ingaba yinja kunye nekati. Kodwa bonke badinga ukunakekelwa okukhulu, okuza kuthatha ixesha elide. Ewe, kuyacaca ukuba umntwana uya kufunga ukuba uya kukunyamekela isilwanyana, uya kwenza konke okulungileyo. Kodwa, eneneni, oku akukwenzekayo, kwaye isilwanyana kufuneka sinyamekele abazali bomntwana.
Kuya kuba sisithakazelo esincinci ukugatya isilwanyana, kuba siya kuhlaselwa ngumntwana entloko yakhe, kwaye ngokubanzi, kufuneka abe nolutsha oluvuyayo. Ngoko kufuneka ucinge ngento elula. Thetha kumntwana, xelele ukuba awukwazi ukuthenga inja ngeli xesha, nangaliphi na isizathu.
Kufuneka ukhethe uhlobo oluthile lwezilwanyana ukuze kungabi nzima ukunakekela. Kunokwenzeka ukuba uqaphele izilwanyana zamanzi. Yiyo - aquarium. Isikhundla abanalo siphelele, abanakukwazi ukusebenzisa i-naskodit, ngoko oku kuyona ndlela ikhethekileyo. Ungathatha ama-aquarium frogs, kuba ukunyamekela kulula.
Indlela yokunyamekela amaxoxo ase-aquarium - siza kukuxelela ngoku kumzekelo weedrogs, kuba, ngamaxesha amva, sele athandwa kakhulu. Ngoko, masiqale.
Okokuqala, kunokuqaphela ukuba i-Shport frogs inomdla "onomdla" onomdla, ukuba umntu unokuyibiza loo nto. Unomlomo obanzi kakhulu kwaye amehlo asondele. Le "ntsoko yobuso" inika i-amphibian njengomntu, ubukeka obunenjongo. Kwanokuba kubonakala ngathi uhlala emomotheka. La maxoxo, ngamanye amaxesha abizwa ngokuba "ahlanjululwe", kuba imilenze yazo enezintindi ibukhali obubomvu. Kuyo yonke into, siyaqaphela ukuba imilenze yemilenze, inayo, iyinyama kwaye iyomelele, engenakutsholwa malunga nemigqomo yangaphambili. Baye, banamandla kakhulu kunabo bangemuva. Basebenzisa xa befumana ukutya kwabo. - eli binzana ungamangalisa, kodwa yonke into iyathakazelisa. Ngolu hlobo lwamaqhekeza e-aquarium agqogqa ukutya emlonyeni kunye neentambo zangaphambili, ezingenakuvuyisa abantwana bakho, kwaye wena ngokwakho. Abaninzi baya kuba nomdla ukwazi ukuba kutheni benza. Impendulo ilula kakhulu: abanalo ulwimi njengamanye amaxoxo, ngoko ke abakwazi ukuqonda ukutya ngolwimi, kwaye umntu kufuneka asebenzise uncedo lweplaws zangaphambili.
Kwaye ngoku siqhubeke siye kwiinkcukacha size sixoxe, sinyamekele amaxoxo ase-aquarium ngokungakumbi. Ukunyamekela ama-aquarium frogs akuko kunzima nakakhulu, kuba ababi kakhulu. Okokuqala, kufuneka uhlinzeke i-frog kwindawo enhle yokuhlala. Unokuthabatha i-aquarium, kodwa oku akuyona ndlela efanelekileyo. Kungcono uthathe i-terrarium, apho, isilwanyana sakho esizayo, siya kuthula kwaye sihlaziye. I-terrarium imele ithathwe ngokubanzi kwaye idibeneyo. Yaye iya kubanzi, ibe ngcono. Emva kokuthenga, hlamba kakuhle, emva koko-khabisa. Unokuzihobisa kwibala lakho. Le yona ngongoma ephambili: umzantsi we-aquarium kufuneka ukhunjulwe: iiplitshi okanye isanti. Unokutshala ngaphakathi kwezinye izityalo ezikhula emanzini, kodwa kukho into ekhethekileyo. Iifrigi zineengqameko ezininzi, ngoko izityalo ziyakwazi ukuphazamisana nazo, ngenxa yoko, ziza kubrazula, ziyikhuphe ize zenze ezinye izinto ezifanayo. Iipasta zabo zinamandla kangangokuthi zinokuthabatha amatye anzima.
Kwimeko yamanzi, iimeko ezikhethekileyo apha azikho. Akukho nto ekhethekileyo. Amanzi kufuneka abe neqondo lokushisa, ibe ngama-degrees angama-25 kwi-Celsius. Sekunjalo, kuya kuba lunqweneleka ukufaka ukukhanya okubonakalayo, oku kuya kukunceda izilwanyana ezinqamlekileyo zihamba zihamba ngamanzi. Ukuba ehostini ukushisa komoya okuhlala kushintshana, ngoko kuyimfuneko ukubeka ukutshisa ngokuzenzekelayo kwamanzi. Musa ukunika i-frog supercooling.
Ukondla amaxoxo akuyi kukukunzima kakhulu: ngokukodwa bathanda ukutya ama-bloodworms amancinci amakhulu kunye nemigodi yehlabathi, iziqwenga zenyama okanye intlanzi. Nawe, unokuthenga ukutya okukhethekileyo kwisitokisini, kodwa ngokukhawuleza i-frog ayiyi kuyidla. Oku kuthatha ixesha. Ukutya kufanelekileyo kwiintlanzi kunye namaxoxo.
Ukuba umntwana wakho akayiqondi, unokufumana imali kula maxoxo. Unokwenza ukuzalana kwazo. Kuyavakala konke okukrakrayo, kodwa ngokwenene konke kulula.
Inyaniso kukuba malunga nanye ngonyaka, amaxoxo akhathaze ixesha-umtshato "ixesha lokukhula". Khangela xa kufika, kulula kakhulu - ngeli xesha amaxoxo aqala "ukucula", oko kukuthi, ukuvakalisa izandi ezivakalayo. Emva kokuba amaxoxo apheliswe ngokupheleleyo, kuthatha ixesha elincinane, kwaye i-frog ibeka amaqanda aphantsi angama-200 afihla emva kwezilwanyana zaselwandle, emva kwamatye kunye nezinye indawo ezifihlakeleyo apho kuya kuba nzima ukufikelela kuzo. Ukuba unomnqweno wokufumana intsha, kufuneka amaqanda adluliselwe kumntu omtsha ngokukhawuleza kunokwenzeka - i-aquarium ehlukeneyo. Oku kufuneka kwenziwe ngokukhawuleza, kuba ama-frogs, ngokwemvelo yabo, bathanda ukutya amaqanda abo, ngokuqinisekileyo, bafumana umdla okhethekileyo kuwo.
Emva kweentsuku ezimbalwa (iintsuku ezi-2 ukuya ku-5) zala maqanda atshaza amaxoxo amancinci. Ngeveki baqala ukutya ngokuqhelekileyo. Abaqalayo, bangadla iplankton, ukutya kwepasta (ukusuka kwiplankton) kunye nokunye ... Gcina ukhumbule ukuba kuya kufuneka ukuba iimeko ezilungele ukulungiselela izifo, oku kukuthi: ukuhlanjululwa okungahambiyo kunye nokukhanya okucwangcisiweyo. Kwakhona, kubalulekile ukwenza i-aeration ebuthakathaka yamanzi. Nangona amaxoxo azincinci, ukuwahambisa kwi-aquarium yangoku akunakwenzeka nakweyiphi na imeko.
Xa amaxoxo sele esakhula ngokwaneleyo, anokutshintshwa kwakhona kubazali bawo, okungeke kube yingozi kwaye kulungile kubo.
Ewe, eli nqaku libonise ukuba kulula kakhulu ukunyamekela amaxoxo, kwaye akuyi kuba nzima, kwesaqala-frog-amanzi. Into ephambili kukugcina imithetho eyintloko, kwaye ke yonke into iya kuba yinto efanelekileyo. Naliphi na umntwana uya kuvuyela ngesipho esinjalo, mhlawumbi yena ngokwakhe unokuzinyamekela.
Kwakukho inzondo kwijaji
Iingxowa zenyama yenkukhu ziphekwe nge-tangerines kunye ne-ginger
Indlela yokucela ukuxolelwa kumfana othandekayo?
I-style grunge 2015 kwiingubo, i-hairdos kunye ne-makeup
I-calcium ifuna ngexesha lokukhulelwa
Iibhisikidi kunye ne-tshokoleta kunye neentlobo
Izityalo - ukutshintshwa okulungileyo kwezibhebhethi
Amahlaya ngo-Ephreli 1 kubahlobo, ofunda nabo, umama nobaba